Vitamin E uwoyela 98%, DL-ALPHA Tocopherol uwoyela - China Toption Imboni
Yemvelo-Beta carotene 96%
Yemvelo Lycopene Beadlet 10% CWS-B Beadlet, wat abandayo ...
Vitamin E uwoyela 98%, DL-ALPHA Tocopherol uwoyela
【Isicelo】 Vitamin E uwoyela 98%, uwoyela DL-ALPHA Tocopherol elisetshenziswa kabanzi Ukuze uthango imajarini, uwoyela amafutha, imikhiqizo umsoco futhi ingane ukudla, futhi efanelekayo capsule esithambile.
【Producer Main】 DSM, wesiFunda Amajuba, Zhejiang Medicine (ZMC), Brenntag
【CAS Cha】: 9002-96-4
【E Cha】: 302
【HS Ikhodi】: 29362800
Ulwazi Deep ku Vitamin E 98% uwoyela emakethe lisenze sikwazi bathole nawe yokuncintisana intengo ex elihle Vitamin E 98% uwoyela abakhiqizi. Uma ufuna Vitamin E 98% uwoyela , unganqikazi Sokuxhumana.
Vitamin E has imisebenzi ezibalulekile eziningana;
Siza ukugcina iseli isakhiwo ngokuvikela cell ulwelwesi.
kuba i antioxidant esisiza ukubambezela eziqhubekayo kulimaze amaseli
Izinzuzo zezempilo kusukela vitamin E yilezi:
Siza ukuvimbela izifo izitsha inhliziyo negazi
Isetshenziselwa nokuvimbela umdlavuza
Siza ukwehlisa high blood pressure
Zokunqanda izifo ezithile isikhumba
Siza nge Ihatilayitisi
ukubukeka White noma powder whitelike
yokuncwaninga izinsimbi kanye namakhemikhali > = 50%
Ukulahlekelwa ku Omiswe = <5.0%
Ukuhlaziya Seive > = 90% ngokusebenzisa No. 20 (US)
Heavy Metal = <10mg / kg
umkhiqizo Ukucaciswa Iphakheji Izicelo main
DL-Alpha tocopherol acetate 93% i-Oyili 200 / 950kg / isigubhu Ngokusebenzisa e okuphakelayo banga.
DL-Alpha tocopherol acetate 98% i-Oyili 20/50 / 200kg / isigubhu Ukuze uthango imajarini, uwoyela amafutha, imikhiqizo umsoco futhi ingane ukudla, futhi efanelekayo capsule esithambile.
DL-Alpha tocopherol acetate powder 50% CWS /
CWS-D 20kg / ibhokisi Kalula dispersible ngamanzi abandayo ngakhoke ingasetshenziswa njengendlela izinqaba imikhiqizo ukudla okomile okufana ufulawa, ubisi powder, isiphuzo powder.
DL-Alpha amandla tocopherol acetate 50% TAB 50kg / ibhokisi Ngokusebenzisa e amaphilisi kanye amaphilisi kanzima.
DL-Alpha tocopherol acetate beadlet 50% TAB-B 20 / 50kg / ibhokisi Ngokusebenzisa e amaphilisi kanzima.
DL-Alpha tocopherol acetate beadlet 75% TAB-B 20 / 50kg / ibhokisi Ngokusebenzisa e amaphilisi kanzima.
Vitamin E (tocopherols ezixutshiwe) 30% / 50% Powder 25kg / isikhwama Ukusetshenziswa ekudleni noma okuphakelayo grade, ikakhulukazi lisetshenziswe izilwane ukudla.
DL-Alpha tocopherol acetate powder 50% SF 25kg / ibhokisi Ngokusebenzisa e amaphilisi okuqukethwe ongaphakeme kanye amaphilisi kanzima.
DL-Alpha tocopherol calcium succinate 96% Crystalline Powder 25kg / ibhokisi Ngokusebenzisa e amaphilisi kanye amaphilisi kanzima.
Ezixutshiwe tocopherol ukugxilisa ingqondo 50/70/90% Oil 20/50 / 200kg / isigubhu Isetshenziswa njengesici i antioxidant emafutheni namafutha, gazinga futhi unsaturated okunamafutha acid.
D-Alpha tocopherol 1000/1100/1200/1300 / 1409IU 20/50 / 200kg / isigubhu Ukuze uthango imajarini, uwoyela amafutha, imikhiqizo umsoco futhi ingane ukudla, libuye lisetshenziswe capsule esithambile futhi njengoba i antioxidant emafutheni namafutha.
D-Alpha tocopherol acetate 1000/1100/1200 / 1360IU 20/50 / 200kg / isigubhu Ukuze uthango imajarini, uwoyela amafutha, imikhiqizo umsoco futhi ingane ukudla, libuye lisetshenziswe capsule esithambile futhi njengoba i antioxidant emafutheni namafutha.
D-Alpha tocopherol acetate powder 700 CWS 20kg / ibhokisi Kalula dispersible ngamanzi abandayo ngakhoke ingasetshenziswa njengendlela izinqaba imikhiqizo ukudla okomile okufana ufulawa, ubisi powder, isiphuzo powder.
D-Alpha tocopherol acetate powder 700 TAB 20kg / ibhokisi 50kg / isigubhu Ngokusebenzisa e amaphilisi kanye amaphilisi kanzima.
D-Alpha tocopherol acetate powder 700 SF 25kg / ibhokisi Ngokusebenzisa e amaphilisi okuqukethwe ongaphakeme kanye amaphilisi kanzima.
D-Alpha tocopherol acetate beadlet 700 TAB-B 20kg / ibhokisi 50kg / isigubhu Ngokusebenzisa e amaphilisi kanzima.
D- Alpha tocopherol acetate beadlet 950 TAB-B 20kg / ibhokisi 50kg / isigubhu Ngokusebenzisa e amaphilisi kanzima.
D-Alpha tocopherol succinate 1210/1185/1185-se 25kg / isigubhu Ngokusebenzisa e amaphilisi kanye amaphilisi kanzima.
Amanzi encibilikayo (Yemvelo) Vitamin E (TPGS) 25kg / isigubhu 10kg / ibhokisi Ukuze izinqaba okudla nokuphuza, ikakhulukazi ukudla ngokweqile ngokubukeka esobala, futhi efanelekayo capsule esithambile.
Okulandelayo: Vitamin E 1000/1100/1200/1300 / 1409IU, D-Alpha tocopherol
Yemvelo Organic Vitamin E acetate
Vitamin Yemvelo E 1000iu
Vitamin Yemvelo E Capsule
Vitamin Yemvelo E Oil
Vitamin Organic E acetate
Vitamin E acetate Amafutha 98%
Vitamin E Powder Ukudla Ibanga
Igumbi 416 No.9 Bengbu Road, Qingdao, 266044, PR China
Ucingo: +86 532 84673486; +86 18953265131 (wechat)
Ifeksi: +86 532-85621129